Weekly Writing Tips: Ny Hasarobidin’ny Fanokafana Tantara Mafonja · Global Voices teny Malagasy
Weekly Writing Tips: Ny Hasarobidin'ny Fanokafana Tantara Mafonja
Voadika ny 25 Desambra 2019 11:53 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2015)
Angonà fampiharana tsara indrindra amin'ny fanoratana sy fanaovana tatitra ato amin'ny Global Voices ireo Weekly Writing Tips (Fikafika Mpivoaka isan-kerinandro momba ny Fanoratana). Atolotry ny toniandahatsoratra Breziliana, Taisa Sganzerla, anao ny fikafika ho an'ny volana Jolay.
Mirary faran'ny herinandro finaritra ho an'ny rehetra, ary tonga soa eto amin'ny Weekly Writing Tips amin'ity volana Jolay ity!
Taisa Sganzerla ihany ity, toniandahatsoratra ao amin'ny Global Voices Breziliana aho. Izaho no hitantana ny WWT amin'ity herinandro ity! Ary voalohany izao ka mba antenaiko fa hanampy anareo ity.
Amin'ity tapany voalohany ity, te hiresaka momba ny hasarobidin'ny famolavolàna fanokafana tantara mafonja aho.
Mazàna mametraka ny lantompeo sy ny fihetsehampo tokony ho hita soritra anatin'ny tantaranao ny andininy voalohany, ary ao anatin'ireny segondra vitsivitsy voalohany ireny no handraisan'ny mpamakinao fanapahankevitra raha hanohy hamaky izy na hiova amin'ny takelaka fikarohana manaraka, noho izany, mendrika ny hanaovana ezaka be izy io.
Ny fitsipika amin'ny fanoratam-baovao dia ny fanombohana amin'ny soritra fototra — famintinana momba ny zava-miseho mari-pototra mikasika ilay tantara izay mamaly ireo fanontaniana “W” 5 malaza dia ny: iza, inona, aiza, oviana ary nahoana.
Kanefa arakaraka ny lohahevitra, misy fomba miavaka maro hafa koa ahafahanao manomboka ny tantaranao. Afaka atombokao miaraka aminà mpandray anjara sy ny fomba ifandraisan'ny tantarany manokana amin'ilay sombin-tantara ankapoben'ny zava-mitranga ianao. Na afaka manoritsoritra ny tontolo isehoan'ilay tantara.
Nandritra ireo taona niasako tamin'ny haino amanjery, tsy nanaiky ireo tantara manomboka amin'ny fitaterana tenin'olona mihitsy ireo toniandahatsoratra, izao manokana kosa tsy tonga dia hanàla izany: anatinà toejavatra sasany, mety ho fanokafana tsara be ny fitaterana teny matanjaka.
Ireto misy fanokafana tantara tsy manaraka renty ato amin'ny lahatsoratra GV izay ankafiziko manokana.
Jereo ny fomba nanombohan'i Fernanda Canofre, iray amin'ireo mpanoratra Breziliana ato amintsika, tamin'ny alalan'ny toejava-misy mialohan'ny nanazavany ny votoatin'ilay tantara tao anatin'ilay lahatsoratra “Mpisipa Pelaky Ny Tantara Mitohy Meksikana Natsipy indray tanatin'ny Lalimoara tao amin'ny Fahitalavitra Breziliana“:
Efa hatry ny ela i Brezila no malaza eran-tany noho ireo tantara mitohiny. Rehefa nitotona taminà andro tsy fiasàna ny fifidianana izay handimby an'i Gorbatchev tamin'ny 1996, nandefa ny fizarana faran'ny “Mulheres de Areia” (Vehivavim-pasika) ny governemanta Rosiana mba hampirisihana ireo mpifidy hijanona ao an-tanàna ary handeha any amin'ireo birao fifidianana. Nalaza be tao Sina Kaomionistra sy tao Kiobà tamin'ny taonjato faha-1980 ny “Escrava Isaura” (Isaura Andevo), momba ana vehivavy fotsy hoditra iray natsangana ho andevo nandritra ny vanimpotoana fanjanahan-tany.
Tamin'ny alalan'ireo tantara amin'ny fahitalavitra no nahalalan'ny Breziliana ireo adihevitra ankehitriny, toy ny fitondràna vohoka tsy an'ny tena, ny fanandevozana manaraka ny toetrandro, ny hetsika ataon'ireo tantsaha tsy manana tany, ireo fandikàna olombelona, ny bioetika sy ny sisa. Na tantara tsara na tantaram-pitiavana mahantra kely ara-panotana fotsiny aza izy ireo, tsy azo iadian-kevitra fa fitaovana lehibe nentina nampidirana ireo adihevitra eo amin'ny fiarahamonina tao amin'ny firenena ireo tantara mitohy amin'ny fahitalavitra — na dia amin'ny endrika efa fahita na feno fitahirizana fomban-drazana aza matetika.
Na ity lahatsoratra nosoratan'ny Public Radio International ity, izay manomboka amin'ny fanoritsoritana ny tontolo isehoan'ny tantara:
Makà bahana kely manoloana ireo torapasika fotsy sy trano fivahinianana lehibe ao Zanzibar dia tafiditra anaty tontolo hafa mihitsy ianao. Toerana izay mihamainty ny ankamaroan'ireo vohitra feno vovoka ao anivon'ny nosy vantany vao milentika ny masoandro. Amin'izany fotoana izany no tena ahitàna ny tsy fitoviana eo amin'ireo olona manana herinaratra sy ireo tsy manana izany.
Mitovy amin'izany ny ataon'ity lahatsoratra avy amin'i Pantha Raman Reza, mpanoratra ato amin'ny GV, mikasika ny fahatongavan'ny talio ao Bangladesh:
Tany ho any, nisy olona nidibo-drano hatreny amin'ny lohaliny, tany ho any, nisy fiara simba teny afovoan-dalana noho ny tsy fahatomombanan'ny milina, ary tany ho any, lasa nofiratsy ho an'ireo mponina ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Toy izany no nandraisan'i Bangladesh ny fiandohan'ny vanimpotoan'ny talio tamin'ity taona ity, rehefa nifanena tamin'ireo fantsona fanarian-drano ny orana mikija ary lasa renirano ny arabe.
Tena tiako be koa ny fomba nanombohan'i Janine Mendes-Franco ity lahatsoratra ity tamin'ny alalan'ny andalana kely izay mety hanampy hampita fangorahana any amin'ny mpamaky amin'ilay tantara.
Alaivo sary an-tsaina hoe teraka any aminà firenena iray ianao ary avy eo lazaina fa tsy manana zo amin'ny maha-olompirenena anao; fa tsy ilaina any ianao. Izany indrindra no nitranga tato anatin'ny fotoana vitsivitsy ho an'ireo Dôminikàna teratany Haitiana.
Fantatrao ve: Vao haingana, raha vao niasa voalohany ho anà gazety mpivoaka isanandro amin'ny teny Anglisy aho, nahafantatra aho fa matetika fehezanteny iray ny fitarihana ny vaovao sarotra amin'ny teny Anglisy, mazàna teny 30 fara-fahabetsany. Mandritra izany fotoana izany, hazonin'ny fanoratana vaovao manara-penitra amin'ny teny Portiogey fa matetika dia andininy iray izay ahitàna fehezanteny roa na telo ny fitarihana, ary 100 no teny hita ao raha be indrindra. Manontany tena aho hoe ohatra ny ahoana izany ho an'ny teny hafa!
Miovaova be isika ato amin'ny GV amin'ny fanoratra ny fanokafana, noho izany, ndeha samy hanararaotra izao fizaràna izao mba hanazarana ny hery famoronantsika mandritra ny fanoratana azy ireny! 🙂
Amin'ny herinandro indray mifankahita!
4 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy
1 andro izayAngola